Waa kee ciyaaryahanka uu Cristiano Ronaldo doonayo inay Juventus kala soo saxiixato kooxda Barcelona? – Gool FM
Waa kee ciyaaryahanka uu Cristiano Ronaldo doonayo inay Juventus kala soo saxiixato kooxda Barcelona?
Haaruun May 3, 2019
(Turin) 03 Maajo 2019. Waxaa la soo sheegayaa ciyaaryahanka uu doonayo Cristiano Ronaldo inay kooxdiisa Juventus kala soo saxiixato naadiga Barcelona ee ka dhisan dalka Spain.
Cristiano Ronaldo ayaa doonaya in kooxdiisa Juventus ay kala soo saxiixato Barcelona goolhaye Marc-Andre ter Stegen.
Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa la soo warinayaa inuu maamulka kooxdiisa u sheegay inay la soo wareegaan goolhayaha Barca ee Marc-Andre ter Stegen, maadaama ay raadinayaan inay ku guuleystaan Champions League.
Bianconeri ayaa laga soo cirib-tiray tartankan kaddib markii ay cel-celis ahaan goolal gaaraya 3-2 ay ku reebtay naadiga Ajax ee dalka Holland wareegii siddeed dhammaadka ee koobka horyaallada Yurub.
Taasna waxaa loo arkayay niyadjab weyn oo dhanka Ronaldo ah, kaasoo koobkan la qaaday saddexdii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay kooxda Real Madrid ka hor inta uusan Turin ugu soo dhaqaaqin 100 milyan oo gini xagaagii la soo dhaafay.
Warsidaha Spanish-ka ah ee Don Balon ayaa shaaca ka qaaday in Ronaldo uu doonayo inay Juve ganacsi ka sameyso suuqa oo ay la soo wareegto goolhaye Ter Stegen, taasoo sidoo kale wiiqi lahayd awooda kooxda ay tartammada Yurub ku xafiiltamaan ee Barca.
Goolhaye Ter Stegen ayaa si joogto ah ugu soo bilaabanaya safka hore ee kooxda ku guuleysatay horyaalka Spain saddexdii xilli ciyaareed ee laga soo gudbay, waxaana lagu qiimeeyaa in ka badan 85 milyan oo gini.
Shabaq ilaaliyaha kooxda Manchester United ee David de Gea iyo goolhayaha kale ee Barcelona Jasper Cillessen ayaa sidoo kale loo arkaa bedelka Wojciech Szczesny.
Monaco oo shaacisay lacagaha ay ku doonayso in looga iibsado Radamel Falcao & Kooxaha uu bartilaameedka u yahay
"Nasiib ayaan ku leeyahay inaan markasta ka hor imaaneyn Messi isla markaana aan ka ciyaareyn horyaalka Spain.".- Van Dijk